Misaona ny asa fanaovan-gazety :: Nodimandry i Jean Tridor Fred Rasamoely • AoRaha
Misaona ny asa fanaovan-gazety Nodimandry i Jean Tridor Fred Rasamoely
Nindaosin’ny fahafatesana, omaly, teo amin’ny faha-89 taonany i Jean Tridor Fred Rasamoely, mpanao gazety malagasy isan’ny zokiolona. Isan’ireo andrarezina teo amin’ny asa fanaovan-gazety izy fony fahavelony ary nanana ny toerany teo anivon’ny haino aman-jerim-panjakana.
Efa nitazona ny toeran’ny Tonian’ny fanoratana tao amin’ny onjam-peom-pirenena, tamin’ny taona 1970 hatramin’ ny taona 1972, Rasamoely, araka ny fiantson’ny maro azy.
Tonian’ny fanoratana tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana indray izy ny taona 1972 hatramin’ny taona 1975. Mialoha ny nandraisany an’ireo toerana ireo dia izy no nisolo tena an’i Madagasikara tamin’ny fivoriana fahefatra notante­rahan’ny Komity fifampiraharahana teo anivon’ireo sampandraharaha mikasika ny onjam-peon’ireo firenena tsy momba ny atsy na ny aroa, tany Alger.
Lehiben’ny Sampandraharahan’ny horonantsary sy ny televiziona nasionaly sady Tonian’ny fanoratan’ny filazam-baovao, tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa i Jean Tridor Fred Rasamoely. Efa tonian’ny fanoratana tao amin’ny gazety “Riandrano” ihany koa izy tamin’ny taona 1995. Isan’ireo mpitsara lahatsoratra tao amin’ny gazety “Midi-Madagascar” ary nanohy an’io asa io teto amin’ny vondron-gazety “L’express de Madagascar” , nanomboka tamin’ny taona 1995 hatramin’ny taona 2015. Manana ny mariboninahitra “Chevalier de L’ordre National Malagasy” sy ny “Officier de L’ordre National malagasy” i Jean Tridor Fred Rasamoely.
Mirary fiononana sy fankaherezana ho an’ny fianakaviany ny vondron’orinasan-tserasera PREY, tantanan’i Edgard Razafindravahy, izay ahitana ny vondrona L’Express de Madagascar, ny Radio Antsiva, ny vondrona RTA, ny RFM sy ny Ecoprim.
Famalifaliana noho ny fety :: Fianakaviana maro notoloran’ ny vondrona Filatex kojakoja samihafa
Tsy fanarahan-dalàna :: Natsahatry ny fanjakana ny fanorenana tranona depiote iray